AKHRISO Natiijada Saddexdii Kulan Ee Ay Hore U Kulmeen Chelsea Iyo Real Madrid & Rekoodhka Cajiibka Ah Ee Ay Blues Haystaan - Laacib
HomeWararka Champions LeagueAKHRISO Natiijada Saddexdii Kulan Ee Ay Hore U Kulmeen Chelsea Iyo Real Madrid & Rekoodhka Cajiibka Ah Ee Ay Blues Haystaan
AKHRISO Natiijada Saddexdii Kulan Ee Ay Hore U Kulmeen Chelsea Iyo Real Madrid & Rekoodhka Cajiibka Ah Ee Ay Blues Haystaan
April 15, 2021 Saed Mohamed Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga, Wararka Premier League 0
Chelsea ayaa tagi doonta gegida Alfredo Di Stefano lugta hore ee wareega afar dhammaadka Champions League iyada oo kalsooni weyn isku qabta haddiiba ay in uun taariikhdu saamayn ku leedahay ciyaarta ay Real Madrid booqanayso.
Chelsea ayaan wax guuldarro ah wali kala kulmin kooxda ree Spain dhammaan saddexdii kulan ee ay hore usoo kulmeen taas oo kalsooni siinaysa xiddigaha tababare Thomas Tuchel hormoodka u yahay.
Chelsea ayaa habeen hore guuldarro 1-0 ah kala kulantay dhigeeda FC Porto ciyaartii lugta labaad ee wareega siddeeda balse guushii 2-0 ka ahayd ee ay ciyaartii hore gaadheen ayaa ugu filnaatay inay wareega afarta ka xaadiraan.
Tuchel ayaa u baahan doona inuu safka xiddigaha kooxdiisa dib u tuso taariikhda ay kooxdoodu ka haysato Real Madrid si uu kalsoonida xiddigaha kooxdiisa kor ugu qaado.
Saddexda kulan ee ay labada kooxood hore u kulmeen ee aysan Blues guuldarrada soo arag ayay laba kamid ah guulo gaadheen halka ay hal ciyaar bar-bardhac galeen.
Kulankii ugu dambeeyay ee labada kooxood ayaa ahaa mid ay iskugu yimaadeen UEFA Super Cup markaas oo ay Blues 1-0 ku qaadeen koobka.
Gus Poyet ayaa ahaa xiddiga Chelsea guushaas gaadhsiiyay kaddib goolkii uu daqiiqadii 83-aad ka dhaliyay Los Blancos. Dhinaca kale labada kooxood ayaa 1971-kii ku kulmay UEFA European Cup Winners Cup kulankii koowaad ayaa 1-1 ku dhammaaday kahor inta aysan midkii labaad Chelsea 2-1 ku guuleysan.